Ijenali yendalo yongeza "inqaku lomhleli" elibonisa inkxalabo malunga nokuthembeka kwesifundo esiqhagamshela i-pangolin coronaviruses kwimvelaphi ye-SARS-CoV-2-Ilungelo lase-US lokwazi
ezaposwa ngomhla Novemba 12, 2020 by USainath Suryanarayanan
Nge-9 kaNovemba ka-2020, i-US Ilungelo lokwazi khululwe imeyile nababhali abaphezulu be Liu okqhubekayo. kwaye Xiao okqhubekayo., Nabasebenzi nabahleli e Izifo ze-PLoS kwaye indalo oolindixesha. Ezi zifundo zibonelele ngobungqina besayensi kwi-zoonotic hypothesis yokuba ii-coronaviruses ezinxulumene ngokusondeleyo ne-SARS-CoV-2 zijikeleza endle, kwaye i-SARS-CoV-2 inomthombo wezilwanyana zasendle. NgoNovemba 11, 2020, indalo wongeze eli nqaku lilandelayo kwiphepha likaXiao et al. “Inqaku loMhleli: Abafundi bayaziswa ukuba inkxalabo iphakanyisiwe malunga neesampulu zepangolin ezichazwe kweli phepha kunye nobudlelwane bazo kwiisampulu zepangolin ezipapashwe ngaphambili. Amanyathelo afanelekileyo okuhlela aya kuthathwa xa lo mba usonjululwe. ”
Inqaku linokubonwa apha: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2313-x
IiBiohazards, IBhlogazards Blog, Uphando lwethu
Isazinzulu esinongquzulwano lomdla esikhokelayo Lancet I-COVID-19 ikhomishini kwi-virus imvelaphi
Ibhlog yeBiohazards: Inzululwazi enongquzulwano lomdla okhokelela eLancet I-COVID-19 yeqela lekhomishini kwimvelaphi yentsholongwane
Umbutho we-EcoHealth Alliance wenza amalungiselelo esiteyitimenti sososayensi “ngemvelaphi yendalo” ye-SARS-CoV-2